देवदहमा बौद्ध विश्वविद्यालयको नयाँ पूर्वाधार निर्माण हुँदै | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १५:२२ |
लुम्बिनी– लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बुद्धको मावली देवदहमा आजदेखि डीन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयका लागि देवदहमा करिब ९० बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै विश्वविद्यालयले डीनको कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
सरकारले केही दिनअघि मात्र देवदहमा केन्द्रीय संरचनाका लागि झण्डै ९० बिघा जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरेको थियो । सोही जग्गामा पूर्वाधार निर्माण थालनीको प्रक्रियामा शुरु गरिइएको छ ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कूल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एण्ड एप्लाइड साइन्सको डीन कार्यालय देवदहमा खुलेको हो । देवदहमा विश्वविद्यालयले नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । देवदहमा तपोवनसहितको पूर्वाधार निर्माण हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज बिहान डीन कार्यालयको उद्घाटन र नयाँ पूर्वाधार निर्माणस्थलको अवलोकन गरेका छन् ।
सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरमा चिनिने बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनलेविश्वविद्यालको विकासका लागि सरकारले लगानी गर्ने र बौद्ध क्षेत्र, शिक्षामा अनुसन्धानसहित बहुविषयमा यसलाई विश्वस्तरमा चिनिने विश्वविद्यालय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार एकैसाथ निर्माण गर्दै यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रकै रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने निकै मेहनतले देवदहमा विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्ति गरेको भन्दै अब यसको पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले यो हजारौँ विद्यार्थीले भरिएको विश्वविद्यालय बन्ने बताउँदै त्यसका लागि अहिलेदेखिनै दीर्घकालका लागि महत्व राख्ने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बौद्ध विश्वविद्यालयले देवदहको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यत्त, गरेका छन् भने, । विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रबाट देवदहमा तीन विषयको पठनपाठन गरेको जानकारी उपकुलपति डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
एग्रो फोरेष्ट्र, इन्भाइरन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट स्टडिजका स्नातकोत्तर कक्षा देवदहमा शुरु भएका छन् । बुटवल र लुम्बिनीमा पठनपाठन गराइरहेको विश्वविद्यालयले बुटवलमा पनि डीन कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो विश्वविद्यालय सभाले डीन कार्यालयसहितको आंगिक क्याम्पस बुटवलमा खोल्ने निर्णय गरेको र त्यसको पूर्वाधार नयाँगाउँमा बन्ने विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले जनाए ।
एग्रो फोरेष्ट्र, इन्भाइरन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट स्टडिज नयाँ खुलेका विषय हुन् । यो सङ्कायका डीन उकेशराज भुजुले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्दै आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्य यी पाठ्यक्रम लागू गरेको बताए । रासस
Previous११ सहायक सडक सम्पन्न हुँदै
Nextउद्योग वाणिज्य सङ्घमा भोछिभोया र पसछेबीच प्रतिस्पर्धा
आइओएम डिनमा फेरि चलखेल सुरु हुदै
२७ पुष २०७४, बिहीबार ०७:३२
भेडाबाख्राझै यसरी कोचिएर पढ्न बाध्य छन् बालबालिका
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:१३
एमडी, एमएस र एमडिएसमा सर्वोच्चद्वारा २२ लाख शुल्क कायम
१४ जेष्ठ २०७५, सोमबार ११:२८
माइनस १४ डिग्रीमा पनि नियमित पठनपाठन !
१८ माघ २०७७, आईतवार १६:३६